Izinkanyezi se yezinkanyezi kuyinto isayensi yemvelo lokho k
ⓘ Izinkanyezi se yezinkanyezi kuyinto isayensi yemvelo lokho kufunda into yasezulwini futhi izenzakalo. Isebenzisa imathemathiki, iphysics, futhi ikhemistri ukuze ..
Umchazamkhathi yisigaba solwazi esiphathelene nokuqonda umkhathi nemizulane. Kubizwa esiNgisini nge-" astronomy ". Kuwo wona umChazamkhathi sifunda mayelana nomKhathilibe, umKhathinga, umThalakazi, umZilafasimbe, iziNkanyezi, iziShomo, amaQhumanyezi, imiHlabana, uBhaqanyezi/iziBhaqanyezi, iziDangazelakazi, nokunye okuningi okutholakele emkhathilibeni wethu.
Izinkanyezi se yezinkanyezi kuyinto isayensi yemvelo lokho kufunda into yasezulwini futhi izenzakalo. Isebenzisa imathemathiki, iphysics, futhi ikhemistri ukuze ichaze imvelaphi yazo nokuziphendukela kwemvelo. ukuze bachaze imvelaphi kanye kwemvelo. Izinto ye ezithakazelisayo zifaka amaplanethi, izinyanga, inkanyezi, inebula, futhi inkanyezi enomsila. Izimo ezihambisanayo zifaka kwe supernova ukuqhuma, gamma imisebe kuqhume, iquasar, iblazar, ipulsar, imisebe yangemuva yemisebe igagasincane. Ngokuvamile, isayensi yezinkanyezi ifunda konke okuvela ngaphandle umhlaba umkhathi.
Izinkanyezi ingenye isayensi yemvelo endala kakhulu. Impucuko yokuqala emlandweni orekhodiwe yenza ukubonwa kwesibhakabhaka ebusuku. Esikhathini esedlule, izinkanyezi yayihlanganisa nemikhakha eyahlukahlukene iastrometry, ukuhamba kwamazulu, ukubhekisisa izinkanyezi, nokwenziwa kwe amakhalenda. Kulezi zinsuku, ubuchwepheshe izinkanyezi kuvame ukuthi kuthiwa buyafana ne astrophysics.
Ukubhekisia izinkanyezi ihlukaniswe yaba kanye okomcabango amagatsha. Ukubhekisia izinkanyezi igxile ekutholeni idatha kusuka ekubukeni kwe into yasezulwini. Le datha bese ihlaziywa kusetshenziswa imigomo eyisisekelo iphysics. inkolelo izinkanyezi ibheke ekwakhiweni kwamamodeli wekhompiyutha noma wokuhlaziya ukuchaza izinto zezinkanyezi nezimo. Lezi zinkambu ezimbili ziyahambisana. inkolelo izinkanyezi ifuna ukuchaza imiphumela yokuqaphelisisa futhi ukubheka kusetshenziselwa ukuqinisekisa imiphumela yethiyori.
Imfundamakhwela adlala indima ebonakalayo kusayensi izinkanyezi. Ingenye yesayensi embalwa lapho kwenzeka lokhu. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ekutholakaleni nasekuqapheleni imicimbi yesikhashana. Imfundamakhwela izinkanyezi zisizile ngokutholwa okuningi okubalulekile, njengokuthola izinkanyezi ezinomsila ezintsha.
ukusebenzisa ama - special effects ukwakha izithombe zakweminye imihlaba, izinkanyezi izilwane zakweminye imihlaba, kanye nama - spaceships. Ama - Fantasy movies
Ephreli 14, 2020. Kutholwe kabusha ngoMashi 21, 2020. UBrown, u - Abrama. Izinkanyezi Ezi - 7 Eziphezulu Kakhulu ze - TikTok: Uhlu Olusha lwe - Forbes Led by Teen
top AOL October 21, 2008 Justin Timberlake ekhonsathi ihlelwe izinkanyezi in Las Vegas. Yahlolwa November 3, 2008. Emuva phezulu Golf360.com
izinkanyezi 2021, izinkanyezi zanamhlanje, izinkanyezi zenhlanhla, ukuphupha izinkanyezi,